Archive du 20170421
Governemanta Minisitra 3 voadaka
Nesorina tamin'ny toerany ny minisitry ny rano Rolland Ravatomanga, ka votendry ho minisitry ny rano, angovo ary ny akoran'afo i Lantoniaina Rasoloelison,
Raharinirina Jacques Aim� � Fihetsiketsehana salobokomana io fanovana minisitra io �
Ity fanovana indray maka ity no atao hoe � Retouche salobokomana �, hoy ny mpanao politika mpandrindra nasionaly ny antoko Tambatra, Raharinirina Jacques Aim�.
Raharaha Claudine A&C Niala bala ny filohampirenena
Mijoro ho Raiamandreny amin�ny fotoana rehetra ny filoham-pirenena.
Minisitry ny fitsarana Tsy noesorina na dia be mpanakiana aza
Tsy voakitika ny minisitry ny fitsarana Charles Andriamiseza, raha samy nilaza ny mpanara-baovao fa izy no minisitra ratsy toerana indrindra.
Tena menatra sy nanongo tena aho r�ise ry Jean naheno ny fanambaran�ise fa hijoro ho raiamandreny ise fa tsy hiditra lalina amin�iny raharaha nahasaringotra an�ny mpanolotsainan�ise iny
Kaominina Antananarivo Renivohitra Tsy nanome alalana fanorenana eny Andohatapenaka
Nandiso ny filazan�ny minisi-panjakana misahana ny tetikasan�ny filohan�ny Repoblika Narson Rafidimanana ny lefitra voalohan�ny Ben�ny tan�na Antananarivo Renivohitra Julien Andriamorasata omaly teny Analakely.
Nivo Ratiarison �Tsy ampy azy ve ilay 5 taona�, hoy ny mpanao gazety nitory
Nivoaka tamin�ny fahanginany ilay mpanao gazetin�ny Madagate,
8 volana sisa dia higadona ny taona 2018. Taom-pifidianana, hoy ny filazan�ny vaomiera mpikarakara azy izay.
Toby fiantsonana Fasan�ny Karana Mitombo ny gaboraraka, manjaka ny loto
Anisan�ny tobim-piantsonana iray tena mampitaraina ny maro tokoa ny etsy amin�ny Fasan�ny karana.
Ala mando atsinanana Ho ringana ihany ny hiafarany
Ho ringana ihany ny hiafaran�ny ala mando ao Atsinanana vokatry ny fitrandrahana hazo tsy ara-dal�na, hoy ny WWF (World Wide Fund for Nature). N
Vola sy teknolojia Miala any indray ny BNI-NET
Nanavao tanteraka ny fomba fiasany ny Banky BNI Madagascar entina hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.
EPP Andrefanambohijanahary Niova endrika, 107 taona aty aoriana
Niova endrika tanteraka ny sekoly ambaratonga fototra etsy Andrefanambohijanahary rehefa tsy nisy fanamboarana tao anatin�ny 107 taona nijoroany.
VIVO ENERGY sy ny mpianatry ny INSCAE Nanampy ny fitaizana zaza kamboty eny Anosiavaratra
Nifanome tanana nanampy ny Loharanosoa Toko telo, toerana fitaizana zaza kamboty iray eny Anosiavaratra indray ny orinasa Vivo Energy sy ny mpianatry ny sekoly ambony INSCAE.
HORONANTSARY GISA MAINTY Tena nankafizin�ny mpijery
Fahombiazana tanteraka no azon�ny tranom-pamokarana Scoop digital nandritra ny famoahany voalohany ilay horonantsary �Gisa mainty� teto an-drenivohitra tamin�ny Alatsinain�ny Paska lasa teo.